Dowladda Sacuudiga Oo Xuduudda Ufurtay Xujeyda Ka imaanaysa Wadanka Qadar.
Thursday August 17, 2017 - 13:49:48 in Wararka by Super Admin
Wareegto kasoo baxay Boqorka Dowladda Aala Sacuud ayaa lagu ogolaaday in kumanaan qof oo kasoo jeeda dalka Qadar ay gudan karaan Waajibaadka Xajka.
Xukuumada Sacuudiga waxay sheegtay in Xujeyda Qadariyiinta ay soo aadi garaan goobaha barakeysan iyagoo kasoo gudbaya marin xuduudeedka ay wadaagaan wadamada Qadar iyo Saudi Arabia.
Sida ay faafisay wakaaladda wararka Sacuudiga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan WAS xujeyda ayaa kasoo gudbaya marin xuduudeedka Salwa ee labada dal wadaagaan kadibna diyaarado gaar ah ayaa ka daad gureyn doono garoonka diyaaradaha Boqor Fahad illaa ay ka geeyaan magaalada Makka Al Mukarramah.
Dowladda Sacuudiga waxay sheegaysaa in tallaabadan ay qaadatay kadib codsi uga yimid mid kamida wiilasha Boqorradii Qadar soo maamulay kaasi oo lagu magacaabo Cabdalla Bil Cali.
Wararka ka imaanaya Qadar waxay sheegayaan in 100 Xujey ah ay durbadiiba ka gudbeen xuduud beenaadka saacado kadib markii Boqor Salmaan uu ogolaaday in dadka Qadariyiinta ay waajibaadka Xajka soo gudan karaan.
Khilaafka u dhaxeeya dowladaha Khaliijka iyo Qadar ayaa saameyn dhan walba ah ku yeeshay shacabka Qadar, dhinaca kale wasiirka arrimaha dibada dowladda Qadar ayaa soo dhaweeyay tallaabada Aala Sacuud isagoona ku baaqay in degdeg ah xal looga gaaro khilaafka u dhaxeeya dowladaha Gacanka carbeed.